बिबिध | Rochak Khabar
मृत्युको मुखमा पुग्दा स्टिभ जब्सका प्रेरणादायी अन्तिम शब्दहरु
एप्पल कम्पनीका मालिक स्टिभ जब्सको मृत्यु क्यान्सर रोगका कारण सन् २०११ मा भएको थियो । उनी एक सफल व्यवसायी हुनुका साथै अत्यन्त विवेकशील र खारिएका व्यक्ति थिए । उनका हरेक निर्णयहरु दुरदर्शी हुने गर्थे ।
1 Nov, 02:52 AM
आधुनिक प्रेम सम्बन्धका ५ कटुसत्य
कुनैपनि प्रेमजोडीले जिन्दगीभर एक अर्कालाई साथ दिन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । आधुनिकता सँगै सम्बन्ध टुट्ने दर निकै बढिरहेको छ । अहिले नयाँ जमानामा प्रेम तथा यौन सम्बन्ध पनि आधुनिक पाराकै हुन्छ र यसमा सोसल नेटवर्कको ठूलो हात हुन्छ ।
6 Oct, 01:47 AM
पछिल्लो समय बजारमा आएका विभिन्न अध्ययनअनुसार मानिसमा अध्ययनको बानी कम हुँदै गएको तथ्यांक आउन थालेका छन् । मानिसले कम पढिरहेकाले अध्ययन संस्कृति कम भएको तर्क पनि समयसमयमा आउँछन् । 0
22 Sep, 02:36 AM
अरुले के भन्लान् ? ऊ केटाकेटी बेलादेखि नै यस्तै थियो । चुपचाप बसिरहने, लजाउने, धक मान्ने । खुल्न नसक्ने । स्कुलमा हुँदा पछाडिको बेञ्चमा बस्ने । शिक्षकले केही प्रश्न सोधे भने ‘कतै गलत जवाफ पो दिने हुँ कि ! साथीहरूले बिल्ला गर्ने हुन् कि !’ भन्ने डरले जानेको जवाफ दिन पनि हिचक...
16 Aug, 03:30 AM
अशान्त व्यक्ति वरपर भेला भएका मानिसहरूले मलाई जुरुक्क उठ्न भने । मलाई उठ्न सकौँलाजस्तो पटक्कै लागिरहेको थिएन, तर कनी–कनी उठेँ । हिँड्न खोजेँ, खुट्टा खोच्चियो । एउटा मान्छेले मूभ ल्याइदियो, दलेँ । खोच्याउँदै–खोच्याउँदै रामझुलाको पुल तरेर हामी पारि गयौँ । 0
युवा मन किन सुखी छैन ? हामीमध्ये धेरै यो कुरामा अल्मलिन्छौं । कतिपय अवस्थामा आफैंलाई थाहा हुन्न । यद्यपि भित्र केही तत्व छ जसले कुटुकुटु खाइरहेको हुन्छ । उदास–उदास छु । जीवनमा त्यस्तो बज्रपात हुने गरी केही आइलागेको पनि होइन तर पनि दु:खी छु म । किन ? दु:ख जीवनमा केही नराम्रो घटन...
12 Jul, 02:40 AM